🥇 ▷ Cusboonaysiinta Talabixinta Talada ee Steam waxay ku tusi doontaa Ciyaaraha aad sida dhabta ah u Jeceshahay ✅
Cusboonaysiinta Talabixinta Talada ee Steam waxay ku tusi doontaa Ciyaaraha aad sida dhabta ah u Jeceshahay
Valve wuxuu ku dhawaaqay cusboonaysiinta Steam horaantii toddobaadkan kaas oo ka caawin doona dadka in ay ogaadaan cayaaraha ay runtii jeclaan lahaayeen halkii lagu tusi lahaa magacyada ugu sareeya markasta oo ay daneynayaan in ay tijaabiyaan ciyaar cusub.
Isbeddelkan, qeybaha “More sidan oo kale ah” iyo “Adiga ayaa lagugula taliyo” qaybaha talooyinka quudinta ayaa noqon doona kala duwan oo badan oo la xiriira qofka khamaarka ah oo ku saleysan nooca cayaaraha uu isagu ama iyadu wax ku iibsado ama ku ciyaaro madal.
“Markii hore, goorta ay macaamiisha raadinayaan ciyaar iyaga oo ku dhex wareegaya bogga quudinta bogga ama” More More sidan “, ma arkayeen ciyaaro badan oo aan jeclaan lahayn. Intaa waxaa sii dheer, waxaan helnay jawaab celinno badan oo “lagugula taliyo adiga,” waxaan dareensanahay inaad ku caajisan tahay kaliya ciyaaraha ugu caansan mana aanan dareemin inaad shaqsiyan tahay. “, ayuu ku qoray Valve qoraal deg deg ah.
Marka ay soo baxday, waxaa jiray bug “qaybta la mid ah ee Tagsiga” ee talooyinka quudinta taasoo horseedaysa xaaladda hadda jirta ee muujineysa cayaaraha lagu qiimeeyay wax yar oo aad u yar ciyaarta. Valve wuxuu sheeganayaa inuu go’aamiyey taas oo sidoo kale ballaariyey waqtiyada loo adeegsado go’aaminta caanka ciyaarta.
Kaddib markii la tijaabiyay nidaamka cusub ee talo soo jeedinta, shirkaddu waxay xustay a 75% ayaa kordhay tirada booqashooyinka qaaska ah Ciyaaraha iyo a 48% ayaa kordhay booqashooyinka celceliska ciyaar kasta.
Kordhinta tirada hits kaliya kuma koobnayn aragtiyaha. “Bakhaarada meelaha ay ku yaalliin calaamadaha, sida” More sidan oo kale ah “, waxay arkeen koror ku yimid iibsashada iyo liistada liiska ciyaaraha ballaaran. sheegaa boostada.
Dhamaan kordhintaas tirooyinka ah waxay ku dhiirigelisay kooxda Steam inay u gudbiyaan cusboonaysiinta cusub ee quudinta talobixinta qof walba. Marka, maxay yihiin fikradahaaga ku saabsan cusboonaysiinta talasiinta Steam feed? Nala soo socodsii faallooyinka.